Benitez ” Kulankii Swansea Naga Badineysay Fernando Torres Caloosha Ayaa Xanuuneysay” | alcarabiya.com
Benitez ” Kulankii Swansea Naga Badineysay Fernando Torres Caloosha Ayaa Xanuuneysay”
Macalinka Chelsea ayaa ku difaacay Weeraryahankiisa Fernando Torres ciyaartii hooseysay ee uu soo bandhigay kulankii laga badinayay ee Swensea iney u wacneyd taas in laga hayay Caloosha.
Xidiga 50 Million ku fadhiya ayaa waji gabax kala kulmay Taageerayaasha Chelsea markii ay ku ooriyeen oo ay dhaheen,Hala badalo Ninkan Garoonka dhextaagan hala keeno Demba Ba markaasna waa lagu badalay.
Benitez waxaa uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen,Torres Markaan Caloosha waa u fiicantahay,waxaana uu bilaanbi doonaa gool dhalintiisa Xiligaasna Taageerayaasha waa ay u riyaaqi doonaan.	“Aniga ayaa goob joog ahaa Markii Dhaqtarka uu Torres u qoray Kaniinayaal Calooosh ah,waan awooday inaan BA safo isagana dhaawac yar ka soo gaaray tababarka kooxda hasa ahateee Torres waa Nin geesi isagoo xanuunsan maadaama uu goostay in kooxda uu la shaqeeyo.
Chelsea ayaa 2-0 waxaa lagu garaacay Kulankii semi-finalka Capital One Cup waxaana ay taas dhalisay in Taageerayaasha ay saf ka maraan Benitez iyo Torres oo hadalo aysan jecleysan ku dhawaaqayay.
← Wenger Oo Dib U Kocday Jaceylkiisii Van Persie
Cumar Shooli Oo Weerar Toos Ah KU Qaaday Fanaaniionta Cusub -Daawo Video →
Oday biiqe eldoret (k)	January 12, 2013 at 12:41 pm
Farnaldo torres ciyaarta oo socota ayaa xaar shuban ka fakaday digir maharagwe layirahdo ayuu ka dhargay chelsea way ceerin doonaan mar dhow torres hooyadiis ayaa abgaal waceysle ah canbuulada ayadaa bartay